त्रिविको बीआईटी कार्यक्रममा नयाँ अनलाइन फाराम भर्ना खुल्यो, कस्तो छ कोर्ष र क -कसले पाउँछन् पढ्न ? - Khabar Center
त्रिविको बीआईटी कार्यक्रममा नयाँ अनलाइन फाराम भर्ना खुल्यो, कस्तो छ कोर्ष र क -कसले पाउँछन् पढ्न ?
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ब्याचलर इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी (बीआईटी) को प्रवेश परीक्षाको अनलाइन फाराम खुलाएको छ ।
त्रिविले विज्ञान प्रविधि संस्थान अन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसमा सेमेस्टर प्रणाली अनुसार चार वर्षे कार्यक्रम बीआईटीमा भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षाको आवदेन खुल्का गरेको हो । आगामी माघ ३ गतेदेखि माघ २६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने छ । त्यस्तै दोब्बर दस्तुर तिरेर फागुन ४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने छ ।
प्रवेश परीक्षाको आवेदन फाराम अनलाइनबाट मात्रै भर्न सकिने छ । प्रवेश परीक्षाका लागि संस्थानको वेबसाइट tuiost.edu.np मा गएर फाराम भर्न सकिन्छ । फाराम भर्न सकिने पेज माघ ३ गतेदेखि मात्रै लाईभमा हुनेछ । प्रवेश परीक्षाको शुल्क १५ सय तोकिएको छ, जुन ई-बैंकिङ, कनेक्ट आईपीएस र इसेवाबाट तिर्न सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति :पौष ३० २०७८ शुक्रवार - १३:४१:०५ बजे